Shiinaha Glossy lipgloss dhalaalaya lipgloss wholesale no label private lipgloss pigment factory and suppliers | Qurxinta Iris
Lipgloss dhalaalaya lipgloss dhalaalaya jumlo ma laha sumad midab gaar ah oo lipgloss ah
Vegan & Arxan daran oo aan lahayn dhaldhalaalka bushimaha dhalaalaya, si habsami leh oo dhalaalaya. Faruuraha ayay ku qoyaan fitamiino iyo Shea butter.
Lifaaqa bushimahayagu waa mid bilaash ah iyo mid aan naxariis lahayn, oo leh jilicsanaan jilicsan, oo aan bushimaha ku dhegganayn, Qoyaan iyo dhalaal.
Dhaldhalaalka bushimahaani wuxuu hodan ku yahay Faytamiin E dabiici ah, oo si wax ku ool ah u ilaaliya bushimaha, una sameeya filim difaaca bushimaha oo qoyan, wuxuu ka hortagaa qoyaan luminta, wuxuu yareeyaa khadadka ganaaxa iyo bushimaha qalalan iyo xoqidda. Dib u soo celi dhalaalka bushimaha, ka dhig bushimaha jilicsan oo siman, oo waxaad dareentaa qoyaan buuxa.
Ku habboon isu imaatinka qoyska ama asxaabta, bandhigyada moodada, isticmaalka maalinlaha ah iyo wixii la mid ah. Cabbirka la qaadan karo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qurxiso bushimahaaga wakhti kasta, meel kasta. 65 midab oo kala duwan oo si fudud loogu dari karo qaabab kala duwan oo la isku qurxiyo, munaasabado iyo midabbada maqaarka.
Magaca Shayga Bushimaha dhalaalaya
4. Wax dhalaalaya
J: marka hore, nala soo socodsii shuruudahaaga ku saabsan alaabada, markaa waxaan ku siin doonaa soo jeedin waafaqsan oo waxaan ku siin doonaa xigasho, wadar ahaan waxaan u leenahay 65 midab oo ah dibnaha dhalaalaya. Marka dhammaan faahfaahinta la xaqiijiyo waxay soo diri kartaa shay-baarka. Qiimaha muunadda ayaa la celin doonaa haddii amar la bixiyo.
Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa caawinno wixii su'aalo ama jawaab celin ah ee aad hayso!
Hore: Calaamadee bushimaha dhalaalaya oo nadiif ah oo khaas ah oo iibiya lipgloss gloss vegan oo nadiif ah
Xiga: Iibiyaha Lipgloss caadada bushimaha dhalaalaya astaanta gaarka ah ee loo yaqaan 'creamy lipgloss'
lipgloss dhalaalaya dhalaalaya
bushimaha soo saaraha
dibnaha iibiyaha gloss iibiyaha
lipgloss jumlo ma sumad gaar loo leeyahay
sumadda khafiifka ah ee bushimaha
dhalaalaya bushimaha dhalaalaya
shimmer lip gloss sumad gaar loo leeyahay
Gloss bushima cad Clear calaamadda gaarka loo leeyahay jumlada cad ...
Calaamadaha bushimada qaawan ee calaamadaha khaaska ah ee dhalaalaya qaawan ...
bushimaha jumlada gloss OEM caadadii aad logo u gaar ah pr ...